Friday, 16 March 2018 7:37 AM [ Last Update: Friday, 16 March 2018 10:33 AM ]
This file photo shows former Zimbabwe's President Robert Mugabe.
Former Zimbabwean president Robert Mugabe has described his departure from office in November last year as the result of a “coup d'état” that must be undone, potentially setting the stage for renewed political violence in the African country.
“I say it was a coup d'état — some people have refused to call it a coup d'état,” said the 94-year-old Mugabe. “We must undo this disgrace which we have imposed on ourselves, we don’t deserve it... Zimbabwe doesn’t deserve it.”
PressTV-Mugabe resigns, former deputy takes over
The parliament speaker says Zimbabwe's president has declared his resignation.
Robert Mugabe Zimbabwe coup d’état
Labour: Government ‘leaving working families to pay the price for’ energy crisis 4min
Zimbabwe ruling party fires 11 Mugabe-allied MPs
Zimbabwe MPs launch impeachment against Mugabe
Mugabe fired as ZANU-PF party leader